YourBrainOnPorn (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀) အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် - Brain On Porn ၏အမှတ်တံဆိပ်အားချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် Daniel A. Burgess ထံစာရေး။ စာမပေးပါနှင့်။
ငါကြား၏တစ်ခါမျှဖေဖော်ဝါရီလ 2018 မတိုင်မီက ဒံယလေသ Burgess LMFT။ ရုတ်တရက် Mr. Burgess ဘယ်နေရာမှ@BurgessTherapyငါနှင့် YBOP ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Burgess ၏ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတွစ်တာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အများအပြားအောက်မှာ @YourBrainOnPorn tweets) နှင့် Facebook (YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ၏တဦးတည်း Burgess ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာ, ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ Facebook စာမျက်နှာ).
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ / မတ်လတွင်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဒဲန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျသည်ကျွန်ုပ်ကိုရှုတ်ချပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ မုသာကို set ကို နှင့် သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများသူမကနှစ်ပေါင်းများစွာပြသခဲ့သည်။ Burgess ၏မှတ်ချက်များနှင့်တွစ်တာများသည် Prause နှင့်ဆင်တူသည် တီထွင်ပြစ်၏နွှယ်နေတယ်လို့, Burgess နှင့် Prause ပူးပေါင်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းသံသယထွက်ခွာ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဒံယလေသ Burgess (မတ်လ, 2018) ကပံ့ပိုးမတောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများ addressing.
ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်တွင်တစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် YourBrainOnPorn.com ။ URL ကိုနှင့်အတူသစ်က်ဘ်ဆိုက် realyourbrainonporn.com ပေါ်တူဂီသည်၎င်း၏ယခင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ScienceOfArousal.com ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ imposter site အသစ်သည် each ည့်သည်ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးစာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏ဗဟိုက“, Porn တွင်အစစ်အမှန်သင့်ဦးနှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်"သင်၏ ဦး နှောက် Porn တွင်သင့် ဦး နှောက်။ " ဟု tab ကိုမဟုတ်မမှန်ကြေညာခဲ့သည် သူတို့၏ဆိုက်အသစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်တရားဝင် YourBrainOnPorn အားမထီမဲ့မြင်ပြုကဲ့သို့ပြုသူအားဆိုက်ကိုဖန်တီးသူများက Twitter အကောင့်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည် (https://twitter.com/BrainOnPorn), ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာနှင့်ထုတ်ဝေနေတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သောဆိုက်အသစ်၏ပိုင်ရှင်ကိုမသိသောကြောင့် 1 မေလ 2019 ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ရှေ့နေများ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏“ သင်၏ ဦး နှောက် On Porn”၊YourBrainOnPorn.com” (ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်) သည်ချိုးဖောက်သောဆိုက်၏နောက်ကွယ်ရှိပုံရသူအများစုထံသို့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည် "ကျွမ်းကျင်သူများက" (နီကိုးလ်ပရာ့စ်၊ မာတီကလိန်း၊ လင်နေးလာ၊ ဒေးဗစ်ဂျေလီ၊ အမ်မလီအက်ဖ်ရော့မန်၊ ရှမွေလပယ်ရီ၊ တေလာကိုဟွတ်၊ Justin Lehmiller၊ Victoria Hartmann၊ Julia Velten, Roger Libby, Doug Braun-Harvey၊ David Hersh, Jennifer Valli, Charles Moser ။
WIPO ၏မယုံနိုင်စရာ၊ မထောက်ပံ့နိုင်သောဆုံးဖြတ်ချက်
ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေများကတိုင်ကြားချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်အဖွဲ့အစည်း (WIPO) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ချိုးဖောက်က်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းမှဖြစ်နိုင်သမျှလမ်းကြောင်းအဖြစ် www.realyourbrainonporn.com တတ်နိုင်သမျှလျင်မြန်စွာနှင့်စီးပွားရေးအရဝက်ဘ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်။ WIPO မှကန ဦး တိုင်ကြားချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်၊ ဒံယလေသ Burgess မှတ်တမ်း၏ဆိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့် Burgess အားပြင်ဆင်ချက်ကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
WIPO ခုံသမာဓိရုံးက RealYBOP ဖယ်ရှားရေးကိုထောက်ပံ့ရန်ငြင်းဆန်နေစဉ်ချိုးဖောက်နေသည့် URL သည်ကျွန်ုပ်၏ URL နှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေကြောင်းသူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် www.yourbrainonporn.com။ ထို့နောက်သူသည်ချိုးဖောက်သော site သည်“ gripe” site တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ site ကိုဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျနော့်ရှေ့နေများကတကယ်တော့ဒါဟာ“ gripe site” မဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမဝေဖန်ပါဘူး တကယ်တော့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလုံး ၀ မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲရှုပ်ထွေးသောပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏“ အမှန်တကယ်” ဗားရှင်းအဖြစ်သာဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်သူသည်ချိုးဖောက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်“ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာ” ဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီးကျွန်ုပ်၏တိုင်ကြားချက်၏တတိယအပိုင်းကိုစစ်ဆေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူကပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေများမှသက်သေအထောက်အထားများသည်“ မကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အလုံအလောက်ရှိနိုင်သည်” ဟုဆိုသည်။ သို့သော်သူသည်“ gripe site” ၏တွေ့ရှိချက်ကြောင့်ထိုအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဒီမှာပို).
ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်တွစ်တာအကောင့်ကိုတုပစဉ် Prause & Burgess ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်၎င်းတို့သည်ကျူးကျော်သူများ၊
အံ့အားသင့်စရာ။ ဆက်သွယ်ရေးများအရ Prause နှင့် Burgess ၏တရားဝင်အကြံပေးသူမှာ Wayne B. Giampietro ဖြစ်သည်၊ Backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးမှုနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ USA Today ဆောင်းပါး: Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်။ ) စွဲချက်တင်မှုက Backpage ပိုင်ရှင်များကိုအခြားသူများနှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဟုကြံစည်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါဝင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန် - https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, Backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
တရားမ ၀ င်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ USPTO ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (YBOP, yourbrainonporn, yourbrainonporn.com) ကိုကျွန်ုပ်အပြီးသတ်နိုင်သည့်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Prause သည် WIPO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှတစ်ဆင့်လက်နက်ချခဲ့ပြီး WIPO စာမျက်နှာသို့၎င်းအားသူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျူးကျော်ခြင်းမှလုံးဝလွတ်မြောက်စေသည့်အနေဖြင့်အဆက်မပြတ်တွစ်တာလုပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ alias အကောင့်၏ဇီဝ (@BrainOnPorn) သည် WIPO ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝါကြွားနေပြီးသိပ္ပံကိုအလွန်မုန်းသည်ဟုအရူးအမူးစွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့သည် -
ချီးမွမ်းခြင်းသည် WIPO ၏တိုင်ကြားမှုကိုတရားစွဲမှုအဖြစ်ဆက်လက်ရည်ညွန်းသည်။ ၎င်းသည်တရားစွဲဆိုမှုမဟုတ်ဘဲအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတရားစွဲဆိုမှုကိုမလိုအပ်ဘဲပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူမလည်းကျနော်တို့ကသိပ္ပံကိုမုန်းဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့သူမနှင့်သူမခရိုနီများသည်သိပ္ပံပညာကိုမုန်းတီးကြသည်။ porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ချယ်ရီကောက်ယူသည့်အပြင်လူနေမှုလေ့လာမှု၊ ဘက်လိုက်မှု၊ ကွာဟမှုများ၊ စာရင်းပြုစုထားသည့်လေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်လုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးသည်။
နှစ် ဦး FTW
ကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအပြီးသတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော့်ရှေ့နေများသည် Burgess ကို ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၂ တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ C&D စာ၏ PDF ဖြစ်သည်:
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သော URL www.realyourbrainonpron.com ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများနှင့်၎င်း၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” အားလုံးသည်ကန ဦး URL www.scienceofarousal.com သို့ပြန်သွားကြသည်။
(နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်နောက်ထပ်အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်)
RealYourBrainOnPorn tweets (စာမျက်နှာ ၂) - ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်လိုလားသူမဟာမိတ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောမည်သူမဆိုကိုအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်အသရေပျက်စေရန်တွစ်တာအကောင့်ကိုဖန်တီးသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန် (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) ဂယ်ရီ Wilson သည်ယခု RealYBOP URL ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ပါ - သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်.